I-Elegant Beach Condo w/ I-Terrific Ocean Views, Indawo Yomlilo, kanye Nendawo Enhle!
San Clemente, California, i-United States
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Vacasa California
U-Vacasa California unokuphawula okungu-21 kwezinye izindawo.
Okwesibili ungena kuleli gumbi lokulala eli-2/2 lokugezela lolwandle, ubingelelwa ngokushesha ukubuka kolwandle nokukhanya kwemvelo okumangalisayo. Uphahla lwangaphakathi oluhle olunemishayo yokhuni olumhlophe luvula lesi sikhala ukuze lunikeze inkohliso yokuvumela ingaphandle lingene. Le ndawo ekahle, le ndlu ebanzi iqhelelene nje namabhishi amahle e-San Clemente kanye nezindawo ezikhangayo ezihamba phambili, izindawo zokudlela, nezitolo.
Thatha umbono wolwandle ovela egumbini lokuhlala elakhiwe ngefenisha yesimanje nenethezekile kanye nezihlalo ezanele ukuze zonke izivakashi zizijabulele. Umqondo ovulekile ugeleza ngqo ekamelweni lokudlela elinezihlalo ezingu-4; ilungiselelwe ukuzijabulisa. I-TV yesikrini esiyisicaba kanye nokuhlobisa okuthambile, okuzolile kuzokwenza uzizwe usekhaya. Ukuze kube lula, usofa othokomele ungadonselwa kumbhede kasofa wendlovukazi.
Ukuhlala kweqiniso kwaseningizimu yeCalifornia akulutho ngaphandle kwendawo yokuhlala yangaphandle. Ukugoqa okubanzi okuzungeze kuvulandi onomgodi womlilo, ukubukwa kwegquma elihle lase-San Clemente, kanye nefenisha ewubukhazikhazi kuyindlela ekahle yokwehlisa umoya ngengilazi yewayini lapho kushona ilanga...noma indawo ekahle yokuvuka nekhofi lakho lasekuseni!
Ikhishi elifakwe kahle linakho konke okudingayo ukuze ulungiselele ukudla futhi ujabulise abangani nomndeni. Amafasitela nomoya okhanyayo wengeza ekuhlangenwe nakho kolwandle.
Igumbi lokulala eliphakeme linombhede omkhulu ongamaphosta amane, i-TV enesikrini esiyisicaba, ikhabethe elibanzi, namafasitela amakhulu abheke ezintabeni zaseSan Clemente. Igumbi lokulala lezivakashi linombhede ongusayizi wendlovukazi, indawo yokulondoloza, i-TV yesikrini esiyisicaba, nokufinyelela okuyimfihlo kuvulandi wekhaya. Igumbi lokugezela, elitholakala kalula futhi elifinyeleleka kalula kuwo womabili amakamelo okulala, lifakwe ishawa ehlangene nobhavu, okuyize okuyizibuko, nosinki onesitoreji.
Gxila elangeni, jabulela i-BBQ emoyeni omusha wasolwandle, noma uhambe uye emabhishi nasezitolo ezansi nomgwaqo. Njengoba kuhlanganisiwe indawo yokupaka emgwaqweni, indawo yangaphandle emiswe kahle, kanye nezindawo zokuhlala ezinethezekile, ngokuqinisekile uzojabulela ukunethezeka kwekhaya eSan Clemente enhle.
•Leli khaya lilala abantu abayisi-6 emibhedeni. Sizovumela abantu ababili abengeziwe ukuthi balale kule ndawo. Abantu abangaba ngu-8 bangase bahlale ekhaya nganoma yisiphi isikhathi. Umatilasi womoya uyatholakala uma ucelwa ukuze uthole imali eyengeziwe.
•Akukho Ukubhema endaweni - AKUKHO OKUNGEZESIFUNDAZWE (lokhu kungaphakathi nangaphandle kwendawo)
•Ngenxa yesimo sezulu esimaphakathi sasogwini, le ndlu (njengeningi endaweni) ayinaso isiphephetha-moya.
Le yunithi iphethwe yi-Vacasa Seasonals Inc. futhi ingase idinge Idiphozithi Yezokuphepha. I-DRE: 02160171'
Amanothi Okupaka: Kukhona indawo yokupaka yamahhala yemoto engu-1. Le yunithi inendawo yokupaka eyodwa etholakala phambi kwegalaji ebhalwe ukuthi #1 yemoto eyodwa kuphela.
Hlola ezinye izinketho ezise- San Clemente namaphethelo